Mareykanka oo si adag uga hadlay xasuuqa Rohingya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo si adag uga hadlay xasuuqa Rohingya
Mareykanka oo si adag uga hadlay xasuuqa Rohingya
Myanmar(SONNA) Rex Tillerson Xoghayaha arrimaha dibadda ee Wadanka Mareykanka ayaa sheegay in gaboodfallada dalka Myanmar loogu geystay muslimiinta laga tirada badanyahay ee Rohingya ay mas,uuliyaddeeda qaadi doonaan hoggaanka millatari ee dalkaasi kajira, kasi oo ku guul dareystay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka muslimiinta lagu hayo.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr TillerSon Wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in aduunyadu aysan marqaati ka noqon dil wadareedka laga soo sheegayo gobolka Rakhine ee dalka Myanmar.
Waxaa lagu soo waramayaa in Dadkan lafahooda kala carraray gaboodfallo la sheegay in ay millatariga dalkaasi Myanmar kula dhaqaaqeen muslimiinta Rohingya xasuuq ba’an taasi oo dunidu ay ka qeylo dhaamisay.
Dadka muslimiinta Rohingya ayaa dowladdu waxay kala noqotay aqoonsigii muwaadinnimo iyadoo sheegtay in jinsiyad ahaan ay ka soo jeedaan dalka Bangaldheesh, kumanaan qof oo ka cararay xasuuqaasi ayaa ku nool xadka ay wadaagaan labada dale e Myanmar iyo Bangaldheesh.
Previous articleMasar oo looga baroor diiqey dadkii ku waxyeeloobey qarixii Soobe
Next articleKhilaafka diblomaasiyadeed ee Mareykanak iyo dalal badan oo cirka isku sii shareeraya